Mmetụta nke Covid-19 na nyocha okporo ụzọ Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNyochaa Nchọpụta nke Covid-19 na Istanbul Traffic
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Nyochaa nsonaazụ nke covid na okporo ụzọ Istanbul
Emeputara nnyocha iji mata ihe nsogbu oria ojoo a na-eme na njem ndị njem na okporo ụzọ Istanbul. A ga-ejikwa ọmụmụ ihe ahụ iji chọpụta usoro ọhụụ na nyochaa omume ndị njem mgbe ntiwapụ ahụ gasịrị.
Ngwa Azụmaahịa Mmụta Mmụta Ndị njem nke Istanbul malitere nyocha iji chọpụta mmetụta nke ntiwapụ nke Covid-19 na omume ndị njem na usoro njem. Ebe a kwadebere akwụkwọ nyocha wee mepee ọha.
Site n'ọmụmụ ihe ahụ, a ga-ekpebi nsonaazụ nke ọrịa na-emetụta ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị n'okporo ụzọ Istanbul. Na mgbakwunye, a ga-eji ihe omumu a mata usoro ọhụrụ mgbe ntiwapụ gasị na nyochaa mgbanwe na akparamagwa ndị njem.
Ihe nyocha a nwere ngalaba anọ na ajụjụ 32
Nnyocha ahụ, nke ezubere iji nyochaa ma nyochaa omume njem na-agbanwe agbanwe na Covid-19, nwere akụkụ 4 na ajụjụ 32. Na akụkụ nke mbụ, ndị na-egosi mmekọrịta mmadụ na ibe ya; na akụkụ nke abụọ, akparamagwa njem tupu Covid-19; n'akụkụ nke atọ, akparamagwa omume oge 19 na ọnọdụ ọrụ; Akụkụ nke anọ gụnyere ajụjụ gbasara akparamagwa njem oge ndụ na ọnọdụ ọrụ mgbe Covid-19 gasịrị. Na mgbakwunye, na njedebe nke ngalaba nke anọ, enwere ajụjụ ndị a na-enyocha omume na mmeghachi omume ndị mmadụ n'otu n'otu.
Prolọ Ọrụ Istanbul Trafik Science Trafik ga-ekpebi ogologo oge nyocha a ga-adị n'ikuku.
nyocha https://forms.gle/S3c3q7Fkofo7XmvFA Enwere ike ịza ajụjụ site na ịnweta adreesị ịntanetị.
Nyocha nke mmetụta nke YHT na njem na Eskişehir
Nkwado sitere na TUBITAK maka ndị na-enyocha mmetụta Socio-Economic nke Covid-19
Ịkụzi na Ọpụpụ na Mmetụta nke Ụgbọ Ụgbọ okporo ígwè - Nkpọ oku
Nwepu aha na okporo ụzọ okporo ụzọ na mmetụta ha na akụnụba ụwa!
A ga-atụle Mmetụta nke usoro ọzụzụ TEM na usoro elu ọsọsọ na Sapanca
A ga-atụle mmetụta nke Çanakkale Bridge na Lapseki
EMBARQ Na-achọ Ngwọta na okporo ụzọ Istanbul (Video)
NDỊ ọrụ ụlọ ọrụ TUBITAK na-enyocha nsogbu okporo ụzọ na Istanbul
Ngwongwo ụgbọala ụgbọ ala maka Istanbul okporo ụzọ
Ember Çemberyol 'ka okporo ụzọ Istanbul,…
Metro okporo ụzọ na Istanbul okporo ụzọ
Istanbul City Trafik Science Board
TIR agaghị abanye okporo ụzọ Istanbul
Ihe ohuru ohuru na ahia Istanbul
Topbaştan ngwọta ngwọta nke Istanbul okporo ụzọ